ကိုရီးယား ဒီမိုကရက်တစ် ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ - ဝီကီပီးဒီးယား
(မြောက်ကိုရီးယား မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
ကိုဩဒိနိတ်: 40°N 127°E﻿ / ﻿40°N 127°E﻿ / 40; 127
ဆောင်ပုဒ်: br />강성대국 (de facto)
မြောက်ကိုရီးယားမှ ထိန်းချုပ်ထားနိုင်သော မြေအား အစိမ်းရင့်ရောင်ဖြင့် ဖော်ပြထားပြီး ပိုင်ဆိုင်သည်ဟု ဆိုသော်လည်း ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိသော မြေအား အစိမ်းဖျော့ဖြင့် ဖော်ပြထားသည်။
ဘာသာတရား ကိုးကွယ်မှုမရှိသော နိုင်ငံ
မျိုးရိုးလိုက်ဆက်ခံသော အာဏာရှင် အကြွင်းမဲ့အာဏာရှင်ဝါဒအောက်ရှိ ပြည်ထောင်စု ဂျူချဲ တပါတီစနစ်ကျင့်သုံးသော သမ္မတနိုင်ငံ
• အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်နှင့် နိုင်ငံတော်ရေးရာကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ
• Chairman of the SPA Standing Committee နှင့် First Vice President of the SAC
ချိုယောင်ဟေး [မှတ်စု ၂]
• ဆိုဗီယက် အုပ်ချုပ်မှု
၁၉၄၅ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၃ ရက်
• ပထမ ယာယီအစိုးရ.
၁၉၄၆ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၈ ရက်
• ဒုတိယ ယာယီအစိုးရ
၁၉၄၇ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ ရက်
• DPRKအား တည်ထောင်ခဲ့
၁၉၄၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၉ ရက်
၁၉၇၂ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၂၇ ရက်
• UNသို့ ဝင်ရောက်ခဲ့
၁၉၉၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၇ ရက်
• ပန်မွန်ဂျုံ ကြေညာချက်
၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၇ ရက်
၁၂၀,၅၄၀ km2 (၄၆,၅၄၀ sq mi) (အဆင့်: ၉၇)
၂၅,၃၆၈,၆၂၀ (အဆင့် - ၅၅)
၂၁၁/km2 (၅၄၆.၅/sq mi) (အဆင့် - ၄၅)
မြောက်ကိုရီးယား ဝမ် (₩) (KPW)
yy, yyyy/mm/dd (အေဒီ–၁၉၁၁ / အေဒီ)
↑ Kim Jong-un holds four concurrent positions: General Secretary of the Workers' Party, Chairman of the Central Military Commission, en:President of the State Affairs Commission and Supreme Commander of the Armed Forces.
↑ Choe Ryong-hae represents North Korea internationally. The Presidency was written out of the constitution in 1998. ကင်အီဆွန်း, who died in 1994, was declared "eternal President" in its preamble.
↑ Administrative Population and Divisions Figures (#26) (PDF)။ DPRK: The Land of the Morning Calm။ Permanent Committee on Geographical Names for British Official Use (2003-04)။ 25 September 2006 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2006-10-10 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Minahan၊ James B. (2014)။ Ethnic Groups of North, East, and Central Asia: An Encyclopedia။ Santa Barbara: ABC-CLIO။ p. 147။ ISBN 978-1-61069-018-8။ [လင့်ခ်သေ]
↑ Alton၊ David; Chidley၊ Rob (2013)။ Building Bridges: Is There Hope for North Korea?။ Oxford: Lion Books။ p. 89။ ISBN 978-0-7459-5598-8။
↑ "North Korea country profile"၊ BBC News၊9April 2018။
↑ Kim Jong Un's North Korea: Life inside the totalitarian state။
↑ Totalitarianism။ Encyclopædia Britannica (2018)။
↑ "Korea, North"။ Britannica Book of the Year 2014။ London: Encyclopedia Britannica, Inc.။ 2014။ p. 642။ ISBN 978-1-62513-171-3။
↑ Demographic Yearbook – Table 3: Population by sex, rate of population increase, surface area and density (PDF)။ United Nations Statistics Division။ 2012။ p. 5။ 29 November 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ DPR Korea 2008 Population Census National Report။ DPRK Central Bureau of Statistics (2009)။
↑ GDP (PPP) Field listing။ CIA World Factbook။
↑ GDP (PPP) per capita Field listing။ CIA World Factbook။
↑ National Accounts Main Aggregate Database။ United Nations Statistics Division (December 2012)။
↑ ၁၄.၀ ၁၄.၁ North Korean Economy Watch » GDP statistics။ Hyundai Research Institute (South Korea)
↑ Decree on Redesignating Pyongyang Time (30 April 2018)။5May 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။5May 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Telephone System Field Listing။ CIA The World Factbook။
↑ "North Korea Accidentally Reveals It Only Has 28 Websites"၊ 21 September 2016။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကိုရီးယား_ဒီမိုကရက်တစ်_ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ&oldid=695054" မှ ရယူရန်
၂၉ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၇:၅၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၇:၅၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။